» प्रहरीले ‘विप्लव’ समूहका कार्यकर्ता पक्राउ नगर्ने ! निसानामा नेतामात्रै
प्रहरीले ‘विप्लव’ समूहका कार्यकर्ता पक्राउ नगर्ने ! निसानामा नेतामात्रै
३१ बैशाख २०७६, मंगलवार १५:५२ प्रकाशित
बैशाख ३१,काठमाडौं । प्रहरीले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाका सबै कार्यकर्तालाई गिर्फतार नगर्ने आन्तरिक नीति अपनाएको छ । आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न तथा हिंसात्मक घटनामा जोडिएकालाई पक्राउ गर्ने तर कार्यकर्ता भएकै कारण पक्राउ नगर्ने नीति प्रहरीले लिएको हो ।
सुरक्षा निकायले विप्लवका नेता–कार्यकर्ता खोज्ने अभियान तिव्र पारेपछि शीर्ष नेता भूमिगत भएका छन् । पार्टीले औपचारिक रुपमा भूमिगत हुने नीति अख्तियार नगरेपछि शीर्ष नेता पछिल्लो समय सम्पर्कमा आउन छाडेका छन् । सबैजसो नेता–कार्यकर्ताले यसअघि प्रयोग गर्दै आएका सिमकार्ड समेत फेरेका छन् । बाह्रखरीबाट